Sales Engineer Archives - Glory Assumption Space
Sales Engineer (Civil) – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
Location in : Thilawa
1.	Sales Engineer (Civil) – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / သီလ၀ါမြို့နယ် ။ •	Civil ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ် ၀န်းကျင်ရှိရမည်။ •	Customer များနှင့် Communication လုပ်နိုင်ရမည်။ •	Site များသို့ သွားရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:00 – 5:00 PM ) •	ဖယ်ရီနှင့် ယူနီဖောင်းရှိပါသည်။ •	စနေ တပတ်ခြား၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	သီလ၀ါမြို့ရှိ အသင့်ဖျော် Concrete စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သီလ၀ါမြို့ရှိ အသင့်ဖျော် Concrete စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_8221" align="alignnone" width="1690"] Unemployment Workers. Unemployed office workers holding cardboard signs job hunting[/caption]
Sales Engineer – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / တောင်ဒဂုံမြို့နယ်
Sales Engineer – Female - (5) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။ • B.E ( Chemical ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၇ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ • အပြင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Marketing ဆင်းပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။ • တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရေသန့်စက်များထုတ်လုပ်သည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရေသန့်စက်များထုတ်လုပ်သည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Engineer – Male / Female - ( 10 ) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁)Sales Engineer – Male / Female - ( 10 ) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သီလ၀ါမြို့ နယ်။ ( ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက် အင်တာဗျူး ) • English စာ ရရမည်။ • အသက် (၃၀) ၀န်းကျင် ဖြစ်ရမည်။ • Sales Engineer ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ် သို့မဟုတ် (၃) နှစ် ရှိရမည်။ • ကွန်ကရစ်ပိုင်း နားလည်သူ ဖြစ်ရမည်။ • Site များသို့ သွားလာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက်(၈:၀၀) နာရီမှ ညနေ(၅:၀၀)နာရီထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • စနေ တစ်ပတ်ခြား ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည် ။ • ဖယ်ရီ ၊ ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • သီလ၀ါမြို့ နယ်ရှိ ကွန်ကရစ် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS Recruitment နှင့် သီလ၀ါမြို့နယ်ရှိ ကွန်ကရစ် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales Engineer – Female – (7) Posts - လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် + Sales Commission ( ညှိနှိုင်း ) - ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။
၁) Sales Engineer – Female – (7) Posts - လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် + Sales Commission ( ညှိနှိုင်း ) - ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။ • Forklift အရောင်းပိုင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ရမည် ။ • BE ( Mechanical ) ဘွဲ့ရ ( သို့ ) Engineer ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) မှ ညနေ ( ၅:၃၀ ) နာရီအထိ ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ ဖယ်ရီမရှိပါ ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။ • ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ Forklift Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတျခကျြ ။ ။ လြှောကျထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါ တညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
1. Sales Engineer – Male (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။
အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1. Sales Engineer – Male (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ • B.Tech (သို့) BE (EP/EC) • အသက် (25 - 35) နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိရမည်။ • ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချဖူးသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ • အရောင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂ ) နှစ် ခန့်ရှိရမည်။ • English ဘာသာစကား ကောင်းစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ • ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိ၍ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်နိုင်သူများ ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ • တစ်ခါတစ်ရံ ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပ ဒေသများသို့ခရီးသွားလာနိုင်ရမည် ။ • တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ • အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) • ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လူသုံးကုန် နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသော Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။
Sales Engineer – Male/Female - (5) Posts
၁) Sales Engineer – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မန္တလေးမြို့ ။ •	BE/Btech ( Mechanical (or) Electrical ) ဘွဲ့ရရှိထား သူဖြစ်ရမည်။ •	Heavy Machinery ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	မန္တလေးမြို့ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	မန္တလေးနယ်ခံဆိုလျှင်စားစရာစီစဉ်ပေးသည်။ •	တရုတ်စကားပြောနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Heavy Machinery Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Engineer – Male – (5) Posts /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော Heavy Machine Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁) Sales Engineer – Male – (5) Posts /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - BE/Btech/AGTI ( Mechanical) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။ - Heavy Machine နှင့်ပတ်သက်သည့် Spare part ပစ္စည်းရောင်းရမည်။ - အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - စနေ၊တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
1.Sales Engineer – Female (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Sales Engineer – Female (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့ နယ်။ - BE(EP) (Mechanical) (/AGTI (EP) (Mechanical) ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - Sales Engineer လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - Computer Word , Excel , Internet&Email သုံးနိုင်ရမည်။ - ComputerExcel,word,Internet,E-mail ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Engineer (Industrial Sales) -Male(5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Engineer (Industrial Sales) -Male(5)Posts/လစာ-၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ - Can be Male - Gradulate in GTI or BE (Mechanical is preferred) - Aged minimum 28 and above - Must look pleasant and also good English4Skills (reading) (He has to read many specification sheets in English and explain to the customers) - Must be able to use email,excel,word - Must have minimum3years’ experience in industrial sales Strong technical background in lubricant additives. - Follow-up on after sales call reports,customer projects and other requests from customers. - Make technical presentations and explain howaproduct meets customer needs Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Engineer for Industrial Sale – Male / Female (5)Posts
- Graduate in BE or GTI (Mechanical is preferred) - Aged minimum 25 and above - Must look pleasant and also good English skill (reading) (He has to read many specification sheets in English and explain to the customers) - Must be able to use email, excel, word - Must have minimum3years experience in Sale (It can be excepted if he or she is too smart)
Sales Engineer - Male / Female -5Posts / Salary – 250000 Kyats / Bahan Township
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Lighting Distribution ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1.	Sales Engineer - Male / Female -5Posts / Salary – 250000 Kyats / Bahan Township •	Sales & Marketing အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ် အထက်ရှိရမည်။ •	English Skills(Intermediate Level)၇ှိပြီး Foregin Supplier & Customer များနှင့် E-mail ဖြင့်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	Lighting Products ပစ္စည်းများအား Tender နှင့် Project များအတွက် Project ရှာဖွေနိုင်ပြီး Sales Plan နှင့် Sales Target ပြည့်မှီအောင် Project များရှာဖွေနိုင်ရမည်။ •	Computer အခြေခံနားလည်တတ်ကျွမ်းရမည်။Computer Excel,Word,Internet,E-mail,Power Point ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။ •	BE(EP) / AGTI (EP) ဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Engineer - Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Accessories Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Engineer – Male (5)Posts / Salary – 200,000 Kyats & Above/ Kamaryut Township - B.E /B.Tech (Mechanical ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ - Car Bearing ပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ ကမာရွတ်တွင်ရှိသောCar Spare Parts & Accossories Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Engineer – Male (5)Posts / Salary – 250000 Kyats / Kamaryut Township - B.E (or) AGTI (Mechanical ) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - စက်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ - Computer နှင့်ပတ်သက်၍ (Microsoft Word,Excel ,Power Point ,Internet & Email )ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းကျွမ်းကျင်သူ ၊ကားပစ္စည်းဈေးကွက်အတွင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ - ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Project Sales & Marketing /Sales Engineer –Male/Female (5) Posts /Salary -250000 kyats/Bahan Township
မင်္ဂလာပါ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lighting Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Project Sales & Marketing /Sales Engineer –Male/Female (5) Posts /Salary -250000 kyats/Bahan Township - Sales & Marketing အတွေ့အကြုံ (1) နှစ်အထက်ရှိရ မည်။ - English Skills (အနည်းဆုံး Intermediate Level certificate ရှိပြီး Foreign Supplier & Customer များနှင့် Email နှင့်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - Lighting Product ပစ္စည်းများအား Tender နှင့် Project များအတွက် Project ရှာဖွေနိုင်ပြီး Sales Plan နှင့် Sales Target ပြည့်မှီအောင် Project များရှာဖွေနိုင်ရမည်။Computer အခြေခံ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။Computer Excel,Word,Internet ,Email,Power Point ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။BE (EP)or B.Tech (EP ) or AGTI (EP)ဖြစ်က ပိုဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone	No.-09-262223783,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Engineer - Male / Female (5) Posts / Salary - 300,000 Above Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1 . Sales Engineer - Male / Female (5) posts / Salary – 300,000 Above Kyat / SanchaungTownship . -	Generator ပိုင်းကိုအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရပါမည်။ -	Mechanical Power (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ -	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ပြီး စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရပါမည်။ ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )